inguqulelo 1.0.2 – Ndixelele apho ukhona kwaye ndiya…
EyeKhala 22, 2018 ngokuthi umnikelo 2 izimvo
Le nguqulelo wongeza inkxaso mana Geographic IP esekelwe leyo eye luphawu kucelwa ukuba iminyaka embalwa edlulileyo (Xa yokulawula dinos).
Ngaba amandla njani inkxaso kule ubhaqo? Oku lixhomekeke bazizinhanha GeoIP Detection plugin ngu yellowtree.de. Emva kokufaka kwaye isebenze ukuba kwiplagi ukhetho izakuvela kwi izicwangciso ngezantsi nje ubhaqo esekelwe ACCEPT_LANGUAGES okuphezulu. Le interface oluphuculweyo iya kubonisa uya kuba yintoni umphumo xa mana yakho xa ezisafunwa panel yolawulo.
echaza Further, abazidlayo isayithi yakho kubhalwe IsiNgesi kwaye inkxaso ye Spanish. A utyelelo umsebenzisi Spain, ulwimi luzakulawulwa kwakhona Spanish (Okokuqala uqhagamshelwano kweseshoni). Ukuba utyelelo umsebenzisi evela eJamani nangona ulwimi ibanjiwe isiJamane ukususela ulwimi ayinikiwe isayithi kwakhona uguqulelo olungagqibekanga.
Xa omabini izinketho amandla, i ACCEPT_LANGUAGES ziya kuqala.
Lo msebenzi osemqoka sixhaswa zombini abakhululekileyo bookmark us.
Ukuba ufumana naziphi na misredirection xa lo msebenzi ivunyelwe (Kuye kunikwe amandla okwethutyana apha uvavanyo) nceda usazise nge ifomu contact.
Njengesiqhelo, siyathemba uza konwabela olu guqulelo.
PS. Ukuba usebenzisa uhlobo lwangaphambili kwaye update inguqulo entsha ngokupheleleyo aliveli (uhlaziyo kuphela inguqulo free) ungachithi – ukunyusela uguqulelo free kuqala, ngoko nangoko ulandele ngokunyusa uguqulelo ngokupheleleyo, akukho izicwangciso kufuneka kulahleka.
ifayilishwe Phantsi: izaziso Release, uhlaziyo lwesoftwe
EyeKhala 22, 2018 ngexesha 9:13 mna
EyeThupha 11, 2018 ngexesha 2:18 mna
I love this plugin. I think it is the best and least hassle free one for WordPress. Many thanks for continuing to work on this.